क्लीन स्वीपदेखि विरासत जोगाउने चर्चा – Janamanch.com
क्लीन स्वीपदेखि विरासत जोगाउने चर्चा
गत मंसिर १० गते बागलुङमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन शान्तपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको छ । चुनाव भएको पाँच दिनसम्म सबै मिडियाबाट निर्वाचन निश्पक्ष, शान्तपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको खबर सञ्चारमाध्यमहरुमा आए । निर्वाचन आयोगदेखि त्यस मातहतमा रहेका जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन कार्यालय स्थानीय राजनीतिक दलहरु सबैले बागलुङको निर्वाचन शान्तपूर्ण सम्पन्न भएको र ६५ प्रतिशत मत खसेको स्वीकार गरेकै हुन् । बागलुङको निर्वाचनमा बामगठबन्धन र प्रजातान्त्रिक गठबन्धनबीच निकै रोचक प्रतिस्पर्धा र रोचक मत परिणामको आँकलन गर्ने र कहाँ कस्ले बाजी मा¥यो भन्ने आँकलन गर्न प्रशस्त समय मिल्यो । कारण १० मंसिरमा सकिएको चुनावको मतगणना २१ मंसिरको चुनावपछि हुने भएपछि । यतिबेला दलहरुका आ–आफ्ना दाबी हुँदा–हुँदा सामान्य नागरिक स्तथरबाट समेत चिया गफमा कस्ले बाजी मा¥यो भन्ने चर्चा अलि बढेको छ । चर्चासँगै चुनाव धाँधली भयो भनेर पार्टिहरुले उजुरी पनि हाल्न थाले त्यसको चर्चा नगरौं ।
बागलुङ जिल्लामा बामगठबन्धनमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा एकढिक्का भएर चुनावी मैदानमा आएपछि सहजै काँग्रेसले विगत २०६४ यताको विरासतमा कडा अवरोध सिर्जना भएको अन्तरमनले स्वीकारेको हो । प्रजातान्त्रिक गठबन्धनतर्फ काँग्रेसलाई राप्रपाले सघाउने विज्ञप्ती बागलुङ सदरकुकामबाट आयो । तर झिनो जनमत रहेको राप्रपाले काँग्रेसलाई सघाएर खासै मत फरक नपर्ने देखियो । बागलुङको निर्वाचनमा संघीय समाजवादी, नयाँ शक्ति नेपाल, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा तथा मसिहा पार्टिबाट र दुई गठबन्धनबाट गरि २६ जना उमेदवार चुनावी मैदानमा रहेपनि मुख्य प्रतिसपर्धा दुई काँग्रेस र बाम गठबन्धनकै उमेदवारबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने आँकलन छ । चर्चामा जिल्लाका ६ वटै स्थानमा बाम गठबन्धनले भारी मतले विजयी हुने दावी गरेका छन्भने काँग्रेसलाई क्षेत्र नं. १ र केही प्रदेश जितिएला भन्ने आसा रहेको भनाई छ । बागलुङका २ प्रतिनिधिसभा उमेदवार र ४ प्रदेशसभा उमेदवारमा बामबाट २÷२ सिट बाँडेर आएका छन्भने काँग्रेस एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ । मंसिर १० गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा बागलुङका १ लाख ६७ हजार २ सय ६२ मतदातामध्ये १ लाख ९ हजार ११ मतदाताले मतदानमा सहभागीता जनाए ।
बागलुङका दुई वटै प्रतिनिधि सभा सदस्य बामपोल्टामाः
निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बागलुङ क्षेत्र नं. १ मा ८६ हजार ७ सय ५७ मतदातामध्ये प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा ५६ हजार ४ सय ७३ मतदाताले मतदान गरेका छन् । यस निर्वाचन क्षेत्रमा विगतको स्थानीय तहमा बागलुङ क्षेत्र न. १ मा ५२ हजार ४ सय ३२ मतदाताले भोट हालेकोमा स्थानीय तहको निर्वाचन पछि २ हजार २ सय मतदाता बढ्दा यो निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय तहको मतदानमा भन्दा ४ हजार ४१ जना बढी मतदाताले भोट हालेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा बाम गठबन्धनमा २८ हजार २ सय ९३ मत आफ्नो पोल्टामा पारेको थियो भने काँग्रेसले २३ हजार १ सय ३९ मत खसालेको थियो । त्यस समय करिव ५ हजार १ सय ३९ मत फरक रहेको स्थानमा काँग्रेसलाई राप्रपाले सघाउने भनेपछि जित्न सकिन्छ भन्ने आँकलन गरिएको थियो । यस क्षेत्रका काँग्रेस र राप्रपाले राप्रपाको मत ३ हजार बढी भएको दाबी गरेका छन् तर त्यो दाबी गलत भएको स्वयं राप्रपाका एक नेताको भनाई छ । उक्त क्षेत्रमा राप्रपाको मत ५ सयदेखि ६ सयसम्म रहेको भनिएको छ । यस क्षेत्रको स्थानीय तहका राप्रपाले बानपामा एमालेसँग तालमेल गर्दा बामपार्टिलाई मत परेको थियो । उता बरेङ गाउँपालिकामा प्रजातान्त्रिक गठबन्धनलाई सघाएको माओवादी केन्द्रको मत अहिले बाम पार्टिलाई जाने भएपछि बाम गठबन्धन नै यहाँ बलियो रहेकाले यो निर्वाचन क्षेत्र बाम गठबन्धनले जित्ने देखिन्छ । यस निर्वाचन क्षेत्रमा काँग्रेसका तर्फबाट राज्यमन्त्री चम्पादेवी खड्का र बाम गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका डा. सुर्य पाठक चुनावी मैदान प्रतिसपर्धामा छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र नं. २ निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा ८० हजार ५ सय २६ जना मतदाता रहेकोमा अहिलेको निर्वाचनमा ५२ हजार ३ सय ३८ मत खसेको छ । जहाँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल ४४ हजार ५ सय ७४ मत खसेको थियो । यस निर्वाचनमा यहाँको मत ७ हजार ९ सय ६४ मत बढेर गएको छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा यस क्षेत्रमा कुल २५ हजार ५ सय ४० मत बामको पोल्टामा खसेको थियो भने काँग्रेसले कुल १८ हजार ३४ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन कार्यालयको तथ्याँकले देखाएको थियो । यस निर्वाचनमा स्थानीय तहकै निर्वाचनमा बाम गठबन्धन र काँग्रेसबीचको मतान्तर ७ हजार ५ सय ६ मतले फरक थियो । यस क्षेत्रमा थपिएका करिव ८ हजार मतदाता काँग्रेस बाम सबैका छन् । यस प्रदेश क्षेत्रमा काँग्रेसको भन्दा बाम गठबन्धनकै मत बढी देखिएकाले काँग्रेसलाई जित हासिल गर्न सजिलो देखिदैन । एकातिर माओवादी केन्द्रका ह्याबी वेट नेता त्यसमा मतदाता नै बढी भएपछि काँग्रेसले यो निर्वाचन क्षेत्रमा जित्न नसकिने आँकलन गरेको छ । यस निर्वाचन क्षेत्रमा काँग्रेसका पूर्वसभासद नरबहादुर पुन निरज र बामपन्थीबाट माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य देबेन्द्र पौडेल चुनावी मैदानमा छन् ।
प्रदेश सभातर्फ भने रोचक प्रतिस्पर्धाः काँग्रेसलाई खतरामा बागलुङका दुई प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा दुई÷दुई प्रदेश सभा प्रतिनिधिको निर्वाचन भएको छ । अर्थात् जिल्लामा प्रदेश सभा उमेदवारका लागि ४ जना छानिने भएका छन् । प्रतिनिधि सभामा जस्तै प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि काँग्रेस र बाम गठबन्धनकै कडा प्रतिस्पर्धा देखिने छ ।
यस्तै क्षेत्र नं. १ को प्रदेश (क) मा भर्खर सम्पन्न निर्वाचनमा ४५ हजार ४ सय २८ मतदाता रहेकोमा ३० हजार ८ सय १२ मत खसेको छ । यस प्रदेशमा बाम गठबन्धन नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष ईन्द्रलाल सापकोटा र प्रजातान्त्रिक गठबन्धनबाट काँग्रेस बागलुङ जिल्ला सभापति दिपेन्द्र बहादुर थापा चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धीका रुपमा रहेका छन् । यो प्रदेशमा स्थानीय तह निर्वाचन अनुसार बामगठबन्धनको १६ हजार ३ सय ८७ मत तथा काँग्रेसको १२ हजार १ सय २४ मत आ आफ्नो पोल्टामा पारेका थिए । यो हिसाबले बामगठबन्धन ४ हजार २ सय ६३ मतले अघि देखिन्छ । यस प्रदेशमा पर्ने बागलुङ नगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपाको मत बामगठबन्धनमा खसेको थियो भने अहिले यहाँ राप्रपाको मत काँग्रेसलाई गएको छ । काँग्रेस र राप्रपाले यहाँ राप्रापाको २ हजार बढी मत छ भनेका छन् । तर त्यो सत्य नभएको राप्रापाकै दाबी छ । यस स्थानमा ५ सय मत राप्रपाको रहेको बताइएको छ । उता स्थानीय निर्वाचनपछि यस प्रदेशमा नयाँ २ हजार २ सय मतदाता थपिएका थिए । यस प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा २ हजार ३ सय १ मत बढी खसेको छ । यस प्रदेशमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा बढी मत ल्याउने गरि काँग्रेसमा त्यत्ति मत नथपिएको काँग्रेस स्रोतले बताएको छ । तर एमालेले भने विभिन्न स्थानमा काँग्रेसको मत आफ्नो पोल्टामा पारेको दाबी गरेको छ । यस हिसाबले पनि यो प्रदेशमा बामगठबन्धन अघि हुने चर्चा छ ।
क्षेत्र नं. १ कै प्रदेश (ख) मा कुल ४१ हजार ३ सय २८ मतदाता रहेकोमा अहिलेको निर्वाचनमा २५ हजार ६ सय ६१ मत खसेको छ । यो प्रदेशमा बाम गठबन्धनबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापा र लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट काँग्रेसका पूर्व साँसद प्रकाश शर्मा पौडेल चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । जहाँ बाम गठबन्धनका तर्फबाट स्थानीय निर्वाचनमा झरेको मत ११ हजार ९ सय ६ मत खसेको थियोभने काँग्रेसको ११ हजार १५ मत रहेको छ । यहाँपनि बामपार्टिको मत काँग्रेसको भन्दा ८ सय ९१ मतले मात्र अघि देखिएको हो । यस प्रदेशमा अहिलेको निर्वाचनमा २ हजार ७ सय ४० मत बढी खसेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि यस प्रदेशमा नयाँ १ हजार २ सय ६८ मतदाता थपिएका छन् । यहाँ भने काँग्रेसले आशा गरेको छ । कारण राष्ट्रिय जनमोर्चाका उमेदवार भएको यो स्थानमा विगतमा पटक पटक माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच तिक्तता रहेको क्षेत्र र स्थानीय निर्वाचनमा समेत जैमिनी नपामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका उमेदवारलाई एमालेका कार्यकर्ताले धोकाधडी गरेका कारण जनमोर्चा सिध्याउन दुवै पार्टिले धोका दिन्छन र काँग्रेसले जितिन्छ भन्ने तर्क छ । अर्को मतान्तर समेत कम भएका कारण पूर्व सभासद जस्तो मान्छेले यहाँ जित्नु पर्छ भन्ने मान्यता काँग्रेसले राख्ने गरेको छ । तर यो प्रदेशमा यसअघि स्थानीय निर्वाचनमा काँग्रेस माओवादी गठबन्धन थियो । जसका कारण माओवादी मत काँग्रेससँग जोडिदा मतान्तर कम देखिएको बताईन्छ । यसपटक बाम गठबन्धन धु्रविकरणको मुद्धा भएका कारण स्थानीय तहमा जस्तो बामपार्टिका मत मतान्तर नरहने नेताहरुको दाबी छ । अर्को पूर्व सभासदले साँसद क्षेत्र विकास कोषको बजेट मात्र विकास निर्माणमा लगाएको नयाँ अरु कुनैपनि योजना यस क्षेत्रमा नल्याएको बताइन्छ । साँसद क्षेत्र विकास कोषको बजेट पनि आफ्ना कार्यकर्ता सम्मिलित योजना बनाएर खर्च गरेको पौडेलमाथि आरोप छ । जे आरोप आएको छ त्यो सत्य नभएको पौडेलले बताउनुभएको छ । बाम गठबन्धनको दाबी अनुसार यस क्षेत्रमा गठबन्धनका उमेदवारले २ हजार मतान्तरले जित्ने गठबन्धनको दाबी छ । यदि गठबन्धनले भने जस्तै भयो भने काँग्रेस क्लीन स्वीपको खतरामा छ । नभए यो काँग्रेसले भने जस्तै भए यो प्रदेश जित्ने देखिएको छ ।
यता निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को प्रदेश (क) मा कुल मतदाता सँख्या ४७ हजार २ सय ८६ मध्ये ३० हजार ४ सय ६९ मत खसेको छ । यो प्रदेशमा बाम गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका चन्द्र बहादुर बुढा सागर तथा लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट काँग्रेसका मञ्जेशवम मल्ल चुनावी मैदानमा रहेका छन् । यि दुई उमेदवार बीचमै प्रतिस्पर्धा हुनेछ । स्थानीय तह निर्वाचनमा खसेको मतपरिणाम अनुसार यस प्रदेशमा बाम गठबन्धनमा १५ हजार ८ सय ८ मत खसेको छभने काँग्रेसले ११ हजार १ सय मत खसालेको छ । यहाँ पनि बाम गठबन्धन ४ हजार ७ सय ८ मतले यसअघि नै अगाडि देखिन्छ । यस प्रदेशमा स्थानीय तह निर्वाचनमा २६ हजार ९ सय ८ मत खसेको थियो भने अहिले ३० हजार ४ सय ६९ मत खसेको छ । जहाँ ३ हजार ५ सय ६१ मत बढी खसेको छ । यस प्रदेशमा नयाँ २ हजार ८ सय १३ मतदाता थपिएका हुन् । यो प्रदेशमा काँग्रेस उमेदवार मल्ल शहिद परिवारको सेन्टिमेन्टबाट उठाइएको देखिन्छ । राजनैतिक वृत्तमा पार्टिभित्रका असल पात्र भनिएको भएपनि आम जनता र कार्यकर्ताबीच भने उनी नयाँ अनुहार हुन् । मतका हिसावले पनि उनी गलकोट क्षेत्रका भएकाले त्यो क्षेत्रबाट बढी मत पाउने काँग्रेसको दाबी छ तर बडिगाड र ताराखोलामा भने उनलाई चाहेजति मत आउन नसक्ने काँग्रेसकै आँकलन छ । यो हिसाबले यो क्षेत्रमा बाम गठबन्धनका तर्फबाट उमेदवार बनेका चन्द्र बहादुर बुढालाई जित्न सजिलो हुने बाम गठबन्धनको दाबी छ । कारण ताराखोला र गलकोट क्षेत्रमा उनलाई सम्मानजनक मत खस्ने र बडिगाडमा बामगठबन्धनको मत अघि भएकाले बुढाले नै जित्ने दावी गरिएको छ ।
पश्चिम बागलुङको प्रदेश (ख) मा कुल मतदाता संख्या ३३ हजार २ सय ४० मध्ये २२ हजार ६९ मत खसेको छ । यस प्रदेशमा पनि बामगठबन्धन र प्रजातान्त्रिक गठबन्धनबीच निकै रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । स्थानीय तहको मत परिणम अनुसार यस प्रदेशमा बामगठबन्धनका तर्फबाट १० हजार ७ सय ३२ मत खसेको थियोभने काँग्रेसको ६ हजार ९ सय ३४ मत खसेको थियो । यहाँ पनि बामगठबन्धनको मत ३ हजार ७ सय ९८ मतले अघि देखिएको छ । तर यस प्रदेशमा काँग्रेसले आफ्नो फरक आँकलन छ । काँग्रेसका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा ढोरपाटन नगरपालिकामा ५ सय मत र निसीखोला गाउँपालिकामा ५ सय मत काटिएको जनाएको छ । ढोरपाटन नगरपालिकामा देवकुमार नेपाली नगर प्रमुखमा उमेदवारी दिएपछि काँग्रेसका ५ सय मत काटिएको भन्ने काँग्रेसको अनुमान हो । उता निसीखोला गाउँपालिकामा काँग्रेस उमेदवार तारानाथ पौडेल विरुद्ध काँग्रेसकै प्रकाश कुँवर बागी उमेदवार थिए उनले ५ सय मत काँग्रेसको कटाएको बताएका छन् । काँग्रेसकै भनाईलाई मान्ने होभने गठबन्धनको १० हजार ७ सय ३२ मध्ये १ हजार मत काँग्रेसलाई पर्दा बामगठबन्धनको ९ हजार ७ सय ३२ हुने छभने स्थानीय तहमा काँग्रेसका तर्फबाट झरेको मत ६ हजार ९ सय ३४ मा १ हजार थप्दा ७ हजार ९ सय ३४ हुन्छ । यसरी पनि गठबन्धनको मत २ हजार ७ सय ९८ ले बढी नै देखिन्छ । यस प्रदेशमा नयाँ ३ हजार २ सय ६६ मतदाता बढेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा यो प्रदेशमा १७ हजार ६ सय ६६ कुल मत खसेकोमा अहिले २२ हजार ६९ मत अर्थात स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा ४ हजार ४ सय ३ मत बढी खसेको छ । यो मतान्तर जिल्लाका अरु प्रदेशमा भन्दा बढी हो । यो प्रदेशमा काँग्रेसका जित शेरचन र बाम गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका टेकबहादुर घर्ति चुनावी प्रतिस्पर्धी हुनेछन् । यो प्रदेशमा काँग्रेसका उमेदवार जित शेरचन एक शालिन र चतुर युवा नेता प्रतिसपर्धामा आएपछि बाम गठबन्धन भत्काउन सक्ने काँग्रेसको दाबी छ । काँग्रेसले गरेको दाबीअनुसार शेरचनको चुनावी अभियान फरक प्रकारको रहेको तथा उनी आफै पनि एक लोकप्रिय युवा भएकाले यस क्षेत्रका युवाहरुले उनलाई मतदान गर्ने दाबी रहेको छ । काँग्रेसका अनुसार, गठबन्धनका हिसाबले चुनाव जितिने देखिएको छैन तर लोकप्रियताको आधारमा चुनाव जितिएको दाबी छ । यदी शेरचनले चुनाव जिते गठबन्धनका उमेदवार घर्तिलाई २ सय देखि ३ सयको मतान्तरले जित्ने दाबी छ । तर जित्न नसकेको खण्डमा गठबन्धनका उमेदवार टेकबहादुर घर्तिले ५ सयदेखि १ हजारको अन्तरमा जित्ने आँकलन गरेको छ ।
यता बाम गठबन्धनको आँकलनमा यो प्रदेशमा सजिलैसँग जित्ने दाबी छ । काँग्रेसलाई यो प्रदेशमा १ हजार ५ सयदेखि २ हजारको मतान्तरले जितिने गठबन्धनको दाबी हो । बाम गठबन्धनको स्रोत अनुसार काँग्रेसले तमानखोलामा १ हजार मतले गठबन्धनलाई जित्छ । निसीखोलामा गठबन्धनले ५ सयले जित्दा काँग्रेसको मत अन्तर ५ सयले अघि हुन्छ तर ढोरपाटन नगरपालिकामा गठबन्धनले २ हजार ५ सय मतले पछि पार्ने भएपछि २ हजारको अन्तरले जित्ने दाबी छ । तर काँग्रेसको आँकलन अनुसार तमानखोलाबाट ३ हजार मत ल्याउने दाबी छ । जहाँ गठबन्धनलाई २ हजार मतले जितिने, निसीखोला गाउँपालिकामा १ हजार मतले काँग्रेस अघि आउने दाबी छ । दुई गाउँपालिकाबाट ३ हजार मतले अग्रता लिएपछि ढोरपाटन नगरपालिकामा बाम गठबन्धनको ६ हजार मत खस्दा आफ्नो पनि ३ हजारको हाराहारीमा मत खस्ने र २÷३ सय मतले जित्ने दावी रहेको छ । काँग्रेसका अनुसार बागलुङको क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य र क्षेत्र नं. १ को ख बाट प्रकाश पौडेल र निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को ख बाट जीत शेरचनको आशा गरिएको दाबी छ । उता बाम गठबन्धनको दाबी अनुसार बागलुङका दुई निर्वाचन क्षेत्र तथा चारवटै प्रदेशबाट काँग्रेस क्लीन स्वीपमा परेको दाबी छ । काँग्रेसले बागलुङमा यसअघि २०७० साल यता जित्दै आएको बागलुङको विरासत फुत्कन्छ कि भन्नेमा छभने वाम गठबन्धन बागलुङबाट काँग्रेसलाई क्लीन स्वीपमा पार्ने र १७ वर्ष अघिको विरासत फर्काउने दाउमा देखिन्छन् ।